May Nyane: မြသီလာအလွမ်းပြေ(၃၇)
အမမေငြိမ်းရေ.. တကယ်တော့ မြသီလာ အလွမ်းပြေ က ခုမှ စမှာပါလား...း)
ရေးပြပါ.. အမမေငြိမ်း လွမ်းနေတာတွေ
ကျန်ခဲ့တာတွေ က.. ရင်နာစရာ အတိတ်တွေ များတယ်လေ.. နော်
အဠါမ်း သန့်သန့် လေး တွေ ပါ ရေးပြ ပါ..း)
အလွမ်း သန့်သန့် လေး တွေ ပါ ရေးပြ ပါ..း)
ဆက်ရေးပါဦး ... မအားလဲ ဖြည်းဖြည်းချင်းရေးနော် ...
ရေးပြရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ဆရာမ။ ပထမနှစ်တက်တုန်းက သချာင်္ ၁ သစ်တဲ့ စာသင်ကောင်းတဲ့ ဆရာအလုပ်ထွက်တဲ့ပုံလေးကို မြင်ယောင်မိသေးတယ်။ ဆရာကလည်း ကရင် စကားပြောကလည်း ပြတ် ငါနင်တို့ကို လွမ်းနေတော့မှာဟ ဆိုတာနဲ့တင် မျက်ရည်တွေနဲ့ ၀ိုင်းဖက်ငိုကြသေးတာကို သတိရမိတယ်။ အင်း.............
ဆက်ရေးပါဗျာ.. အမှတ်(၁)တည်းကနေအားပေးလားတာ..။ ဘ၀မှတ်တမ်းတစ်ခုရေးဖြစ်တာပေါ့..။
ကျွန်တော် စောင့်ပြီး ဖတ်နေပါ့မယ်
အခုမှဖတ်ရပေမဲ့ မထနိုင်အောင် အစအဆုံးဖတ်မိတယ်. ဆရာမ ရေးနေတာတွေဟာ ရင်ဘတ်နဲ့ရေးနေတယ်ဆို တာခံစားသိနေရတယ်. စစ်အစိုးရရဲ့နည်းပရိယာယ်တွေ ကြားမှာ ဘာမှ မသိပဲကြီးပြင်းလာရတဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေ အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်. ကျမတို့တောင်နည်း နည်းပဲမီလိုက်လို့ သူတို့ရဲ့နည်းဗျူဟာတွေကို သိနေယင် နဲ့ ခံနေရတယ်.88အရေးအခင်းတုန်းက ကျမက 5တန်းလေ သပိတ်မှောက်တဲ့အထဲမှာ ပါသေးတယ်.ကျောင်းကနေပေါ့
ဆက်ရေးပေးပါခင်ဗျာ၊ ဆတ်တငန့်ငန့် ကြီးဖြစ်နေပေါ့။
မမေငြိမ်းကိုချစ်လို့ပြောတာနော်... XXXXXXXXX :))
ဆက်ရေးပါနော်..ဆရာမရဲ့ ထိုင်းက အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်း ဖတ်ချင်ပါသေးတယ်။ ဆရာမအမေနဲ့ ကိုရာကျော်ပုံ ကြည့်ရလို့ကျေးဇူးပါ။ ကိုရာကျော်က သနားစရာလေးတဲ့လား..အဲဒီသနားတာလေးက စတာပေါ့နော်။ :P ။
ဆက်ရေးပါ...ခင်ဗျား..မြသီလာအကြောင်း ၊မြသီလာအလွမ်း တွေ မပါတော့ဘူးဆို ရင်တော့ ခေါင်းစဉ်ပြောင်းရေးတာ ပိုကောင်းမလားလို့ ..
"အမ မေငြိမ်းကို ကောင်းစေချင်လို့ ပြောတာ.." နော် :D
ဆက်ဖတ်ချင်ပါတယ်... ဆက်ရေးပါ ဆရာမ... ခေါင်းစဉ်ကိုပြောင်းချင်ပြောင်လိုက်ပေါ့... ;)
မြသီလာအလွမ်းပြေ များကို စိတ်ဝင်စားစွာဖြင့် အမြဲစောင့်မျှော်ဖတ်နေပါတယ် ....
တကယ့်ဘ၀ပုံရိပ်တွေကို ခံစားပြီးကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေမို့ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားမိတာပါ ဆက်ရေးပါ အမ .......
ဆက်ရေးပါ ဆရာမ။ စောင့်ဖတ်နေပါတယ်။
လှပါတယ်ဆိုမှ.. ဒါတောင် ရေမချိုးရသေးဘူးဆိုသလို ဖြစ်နေပြီ.. နော်..။ နဂိုကတည်းက ရေးချင်လျက် လက်တို့ကိုများ... :P ..
ပြီးတော့ မြသီလာအလွမ်းတွေကတော့ ပါနေမှာလေ.. တနည်းနည်းနဲ့.. ဒါကြောင့် နာမည် မပြောင်းတော့ ပါဘူး..။ အဓိကက မြသီလာကို လွမ်းရတဲ့ အကြောင်းတွေပါပဲ..။
ဆက်ရေးပါ ဆရာမ။ ဖတ်ချင်ပါတယ်။ :)
အစ်မဆက်ရေးပါနော်။ ဒီခေတ်စနစ်ဆိုးတစ်ခုထဲမှာ သားကောင်ဖြစ်ရတဲ့သူတွေ၊ မုဆိုးဖြစ်သွားတဲ့သူတွေ၊ သားကောင်လည်းမဟုတ်၊ မုဆိုးလည်းမဖြစ်ဘဲ နာကျင်ခံစားနေရတာတွေအားလုံးကို အစ်မရဲ့စာတွေ ဖတ်ရင်တွေးဆကြည့်လို့ရပါတယ်။ အဲဒါတွေဟာ နောင်တစ်ချိန်အတွက်တော့ မှတ်တမ်းတွေပါပဲ။
RE: ပြဿနာမီးထွန်းရှာခြင်း :)
ဆက်သာေ၇းခိုင်း..မဟုတ်ရင် TV ကြည့်လိုက်.လျှောက်သွားလိုက်..နဲ့
ဆရာမရေ သူများကို မလိမ်တာ ကောင်းသလို သူများလိမ်တာ မခံရတာလည်း ကောင်းပါတယ်။ ဒါမှ ပညာရှိ သူတော်ကောင်းဖြစ်မှာ။
Autobiography လို ဖြစ်နေတာဆိုတော့ ဒီဖက်က အကြောင်းတွေပါ ပါမှ ပြည့်စုံတော့မှာပေါ့။
ဆရာမ သံခမောက်သာ ဆောင်းထားပေတော့။
ဆရာမကို ကောင်းစေချင်လို့ ပြောတာနော်.. အဟိ။
တီချယ် .. ဆက်ရေးပါ.. ဖတ်ချင်ပါတယ်။
မူရင်းပုံပြင်ဟာ Ralston ရဲ့Krilof and His Fabble စာအုပ်ထဲက ပုံပြင်ပါ။
သရက်မြို့ က ငညှက် ဆိုသူက နတ်မောက်ဘုန်းကျော် ဆီ ကို ရေးခဲ့တဲ့ စာမှာ ဖော်ပြထားတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
နတ်မောက်ဘုန်းကျော်က သူ့ ရဲ့လူကြီးလူကောင်းဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ ထပ်ပြီးတင်ပြထားပါတယ်။
စာရေးဆရာ နှင့် သူခိုး
ရှေးတုန်းက ငရဲပြည်က ယမမင်းကြီး ရှေ့ သို့စာရေးဆရာ တစ်ဦးနှင့် သူခိုးတစ်ယောက် တစ်ပြိုင်နက် ရောက်လာကြတယ်။ စာရေးဆရာ ဆိုသူဟာ ငရဲပြည်မရောက်မီ လူ့ပြည်မှာတုန်းက အလွန်နာမည်ကြီး ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့ စာရေးဆရာတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူခိုးဆိုသူကတော့ အလစ်သုတ် ဖောက်ထွင်းသူခိုး လမ်းဓားပြလုပ် ဆိုတဲ့အဆိုးမှန်သမျှ အကုန်လုပ်လာတဲ့ လူပါ။
သူတို့ နှစ်ယောက် ယမမင်းကြီး ထံမှောက်မှာ အစစ်အဆေးခံပြီးတော့ ပြစ်ဒါဏ်အသီးသီး ချမှတ်ခံကြရပါတယ်။ ငရဲသားတွေက ငရဲအိုးကြီးနှစ်လုံးထဲမှာ တစ်ယောက်စီထည့်ပြီး ဒယ်အိုး အောက်မှာ ငရဲမီးတွေ ဖိုပေးလိုက်တယ်။ သူခိုးရဲ့ဒယ်အိုးအောက်က ငရဲမီးတွေဟာ ၊ မီးတောက်မီးလျှံတွေ ဟိန်းနေပြီး ငရဲခန်းမကြီးရဲ့ကျောက်သားအမိုးကြီးတောင် တဖျစ်ဖျစ်မြည် လာတဲ့အထိ ပူပြင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ ... စာရေးဆရာရဲ့ဒယ်အိုးအောက်ကျတော့ ငရဲသားတွေက ငရဲမီးသေးသေးကလေး ဖိုပေးထားလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ ငရဲမီးသေးသေးကလေးဟာ တဖြည်းဖြည်း ကြီးကြီးလာတာ ငရဲခန်းမကြီး တစ်ခန်းလုံး နီရဲ ထိန်လင်းနေပါသတဲ့ ။
နှစ်ပရိစ္ဆေဒ အတော်ကြာလာတဲ့ အခါမှာ သူခိုးရဲ့ငရဲအိုးအောက်က မီးတောက်ကြီးဟာ တဖြည်းဖြည်း မီးရှိန်လျော့ပြီး မီးငြိမ်းသွားပါတယ်။ နာမည်ကျော် စာရေးဆရာရဲ့ငရဲအိုး အောက်က မီးတောက်ကြီးကတော့ ကြာလေ အရှိန်ကောင်းလာလေ ဖြစ်ပြီး မီးတောက်မီးလျှံတွေ ပိုပြီး ကြီးမားလာပါတယ်။ ကြာလေပိုပြီး ပူလောင်လာလေ ဖြစ်နေပါတယ်။ သူခိုးရဲ့ငရဲမီး ငြိမ်းသေသွားတာ မြင်ရပြီး သူ့ ငရဲမီးက အရှိန်ကောင်းလာတာ တွေ့ ရတဲ့စာရေးဆရာ နာမည်ကျော်က ..... ငါဟာ ပိုက်ဆံမက်မောပြီး င့ါကလောင်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးချင်ရာရာတွေ ရေးခဲ့တဲ့အပြစ်ရှိတာတော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတပါးပစ္စည်းကို မတရားလုယက် ခိုးယူနေတဲ့ သူခိုးနဲ့နှိုင်းစာလျှင် ငါ့ အပြစ်က ဘာမှ မကြီးလှပါဘူး။ ဒီလို ငါ့မှာ အပြစ်ကြီးကြီး မရှိဘဲနှင့် သူခိုးထက်ပိုပြီး အပြစ်ဒါဏ်ခံရတာတော့ မမျှတပါဘူး၊.... လို့ တွေးမိပြီး ....
လို့အော်ဟစ်ပါတော့တယ်။
အဲဒီအခါ ငရဲသူမတစ်ယောက် ဗြုန်းကနဲ ပေါ်လာပြီး နာမည်ကျော်စာရေးဆရာကို ကြိမ်းမောင်းတော့တာပါပဲ။
ဟဲ့ ။။ လူယုတ်မာ ... ။ နင် ဘုရားသခင်ကို ဘာကြောင့်အပြစ်ဆိုနေရတာလဲ ။ နင့်က နင့်ကိုယ်ကို သူခိုးနဲ့နှိုင်းနေရသလား ။ သူခိုးရဲ့ အပြစ်ဟာ နင်ကျူးလွန်တဲ့ အပြစ်နဲ့နှိုင်းစာလျှင် ဘာမှ မပြောပလောက်ဘူး။ သူခိုးဟာ လူ့ ဘဝတလျောက်လုံး တရားလက်လွတ် ဥပဒေမဲ့ဆိုးပေခိုးတိုက်လာတဲ့အပြစ်ကလေးပဲ ရှိတယ်။
နင့်အပြစ်တွေကို ကြည့်စမ်း။ နင်ရေးသားခဲ့တဲ့စာပေအဆိပ်တွေဟာ လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ် စာရိတ္တကို ချိနဲ့သတ္တိကြောင်စေရုံသာမက ၊ ပတ်ဝန်းကျင် လူ့ လောကကြီး တစ်ခုလုံးကို နှစ်ပရိစ္ဆေဒ ကြာလေလေ၊ အဆိပ်အတောက်တွေ ပျံ့ နှံ့လာလေလေ ဖြစ်နေတာပဲ။
နင့်အရေးအသားကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ဖြစ်နေတဲ့ဒုစရိုက်ရာဇဝတ်မှုတွေ ၊ စိတ်ဆင်းရဲ ကိုယ်ဆင်းရဲ ဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေ၊ မိဘစကားနားမထောင်ဘဲ မိဘကို အရှက်ကွဲ အကျိုးနည်းအောင် မိဘ စိတ်ဆင်းရဲအောင် ဆိုးပေပျက်ဆီးနေတဲ့ ကလေးတွေ ၊ အဲဒီကလေးတွေရဲ့ဆင်ခြင်တုံတရားတွေ ၊ အကျင့်စာရိတ္တတွေကို ပျက်ဆီးအောင် လုပ်ခဲ့တာ ဘယ်သူလဲ ၊ နင်လုပ်ခဲ့တာ နင်ရေးခဲ့တာ ၊ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံတွေကို သရော်လှောင်ပြောင်ပြီး လူ့ အသိုက်အမြုံကလေးတွေကို တစစီ ကွဲပြဲသွားအောင် တရားဥပဒေနဲ့အိမ်ထောင်မှု စည်းကမ်းတွေ ဗရုတ်သုတ်ခ ဖြစ်သွားအောင် ရေးခဲ့တာ ဘယ်သူလဲ ၊ နင် ရေးခဲ့တာ။
နင်ရေးတဲ့ စာတွေ ဖတ်ပြီး တစ်တိုင်းပြည်လုံး လမ်းလွဲလိုက်မိတယ်၊ ခိုးမှု ဝှက်မှု ရာဇဝတ်မှုတွေ ၊ သောင်းကျန်းပုန်ကန်မှုတွေ ဖြစ်နေရတာတွေဟာ တိုင်းပြည်ပျက်လု မတတ်ပဲ ။အဲဒါ နင်လုပ်ခဲ့တာတွေ ၊ အဲဒီလူတွေ ကိုယ်ဆင်းရဲ စိတ်ဆင်းရဲ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ ရပြီး ကျဆင်းခဲ့ရတဲ့ ချွေးတွေ သွေးတွေ ၊ မျက်ရည်ပေါက်တွေအတွက် နင့်ကို အပြစ်တင်ရမှာပဲ။
လူယုတ်မာ။ နင်ရေးခဲ့တဲ့ စာတွေကြောင့် လူသားတွေ ဘယ်လောက် ပျက်စီးဒုက္ခရောက်ခဲ့ ၊ ခံစားခဲ့ရတာကို နင်မြင်ပြီလား၊ နင် ဘုရားသခင်ကို မထီမဲ့ မြင် ပြုဝံ့သေးသလား ။ ကဲ .. ။ အဲဒီအပြစ်တွေ ကျေအောင် နင်ဆက်ပြီး ငရဲခံပေအုံးတော့ ဆိုပြီး ငရဲသူမကလေးဟာ ငရဲအိုးကြီးရဲ့အဖုံးကို ဂျိမ်းကနဲ ပိတ်ချလိုက်ပါသတဲ့ ။
ပုံပြင်ကတော့ ဒါပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ဆက်ပြောချင်တာတွေ ရှိပါသေးတယ်။ အခွင့်သာခဲ့ရင်ပေါ့ ။
အော်.. တခုတော့ မှာပါရစေ။ ဖတ်ပြီးသိပြီးသား ဆိုစေအုံးတော့ လက်ဆင့်တော့ ကမ်းစေ့ချင်တယ် ဗျာ။
(ထုံစံအတိုင်း ကျွန်တော် နာမည်သေချာ မဖတ်မိခဲ့တာ ဘလော့ဂါလေးရဲ့ ပို့စ်ပါပဲ...)
ကောင်းစေချင်လို့ ပြောကြတာပဲနော်.. :P
want to say.. ကျမကတော့ သူတော်ကောင်း ပညာရှိဖြစ်ဖို့ထက် အားလုံးကို ရိုးရိုးသားသား ပကတိအတိုင်း ရင်ဆိုင်ချင်တာပါပဲ..။ ကိုယ့်ကို လိမ်လို့မှ လိမ်မှန်း မသိတာတော့ မတတ်နိုင်ဘူး ထင်ပါရဲ့..နော်။
ပြီးတော့ Phoenix.. ရေ..
ဒါပေမဲ့ စာရေးဆရာတိုင်း ငရဲမှာ ကြာရှည်တယ်လို့ ပြောချင်တာဆိုရင်တော့ တော်တော် စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ..။ ကိစ္စတော့ မရှိပါ..။ ရေးတဲ့စာဟာ အဆိုးကို ဦးတည်သလား အကောင်းကို ဦးတည်သလားဆိုတာတော့ ကွာပါလိမ့်မယ်..။ စိတ်မပူပါနဲ့.. စာရေးဆရာ အများစုကတော့ လောကကောင်းကျိုးကိုပဲ ဦးတည်ကြပါတယ်..။ ကျမစိတ်ထင်.. ငရဲမင်းက နအဖလောက်တော့ မဆိုးဘူးထင်တာပဲ..။ အနည်းဆုံးတော့ မှန်တဲ့အတိုင်း ဆုံးဖြတ်မှာပါ.. :D
ကျွန်တော်က ဆရာမ စာတွေကို အမြဲ စောင့်ဖတ်နေတာပါ။ဆရာမရဲ့ အမြင်တွေကို ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူး။ ဘယ်သူဆီကိုမှလဲ ကွန်မန့် မရေးဘူးပါ။ဒါက ပထမဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံး ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ိုစာရေးဆရာတိုင်း ငရဲမှာ ကြာရှည်တယ်လို့ ပြောချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော် ၃ တန်းလောက်ထဲက ပုံပြင်စာအုပ်တွေ စဖတ်တာက စပြီး အခုထိ စာတွေ ဖတ်နေတုန်းပါ ဆရာမ။ အဲဒီလောက်ဆို စာရေးဆရာတွေကို ကျွန်တော် ဘယ်လို သဘောထားမယ် ဆိုတာ ဆရာမ ခန်ံ့မှန်းနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဆိုလိုချင်တာက စာရေးဆရာ တစ်ယောက်ရဲ့ အရေးပါမှုကိုပါ။ လူတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်အယူအဆတွေဟာ သူတို့ အမြဲလေးစား အားကျတဲ့ စာရေးဆရာတွေ ရဲ့အရေးအသားပေါ်မှာ အများကြီး မူတည်နေတယ်ဆိုတာကို ဆိုလိုချင်တာပါ။ ကျန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက် ဘာမှမပါပါဘူး ဆရာမ။ မြသီလာအလွမ်းပြေ ကို ကျွန်တော် စဖတ်ကထဲက ကြိုက်လို့အမြဲတမ်း စောင့်ပြီး ဖတ်နေတာပါ။ ဒါပေမယ့် စာရေးဆရာရဲ့ ပုဂ္ဂလိက ခံစာချက်တွေကို ရေးပြနေတယ်လို့ကျွန်တော် ထင်မြင်နေတယ်။ လူတွေထဲက လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ ထင်မြင် ယူဆချက်ဟာ မှားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ စာရေးဆရာလဲ လူသားတွေထဲက လူသားတစ်ယောက်ပါ။ကိုယ့် မျက်စိနဲ့တွေ့ တာတောင် မှားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဥပမာတွေ အများကြီးပါ။ ဒါကြောင့် စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဟာ သူရေးတဲ့စာတွေအပေါ်မှာ သူတစ်ယောက်ထဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ ခံစားချက်တွေ ထည့်မရေးသင့်ဘူးလို့ ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်။ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲရဲ့ ယူဆချက်ပါ။ ကျွန်တော်ဟာ သာမန်စာဖတ်သူတစ်ယောက်သာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော် ထင်မြင်ယူဆချက်ဟာ ဆရာမလို ဝါရင့် စာရေးဆရာမတစ်ယောက်အပေါ် စော်ကားသလို ဖြစ်သွားရင် နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ ကျွန်တော် စိတ်ထဲကနေ တကယ်တောင်ပန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က စာဖတ်တာပဲ ဝါသနာပါပြီး စာရေးရတာကို အရမ်းပျင်းလို့နောက်ထပ်လဲ ကွန်မန့်ရေးဖြစ်မယ် မထင်ပါဘူး။ အခုတောင် ဆရာမ အနေနဲ့တစ်မျိုးထင်မှာစိုးလို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တာပါ။ဆရာမ ကိုစော်ကာလိုတဲ့ စိတ် ကျွန်တော်ဆီမှာ လုံးဝမရှိတာကို ရဲရဲကြီးအာမခံ ပါတယ်။ မြသီလာ အလွမ်းပြေ(၃၈)ကို စောင့်မျှော်အားပေးနေပါတယ်။
တကယ်လည်း အဲဒီပုံပြင်က နည်းနည်း တဘက်သတ် ဆန်တယ်လေ..။ နောက်တခု .. ကျမရဲ့ ပုဂ္ဂလိက ခံစားချက်ဆိုလည်း ငြင်းစရာ မရှိပါဘူး.. ဘာလို့လဲဆို တော့ ကျမ မြသီလာအလွမ်းပြေကို စရေးကတည်းက Memoirs ဆန်ဆန်ရေးချင်တာလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ နောက်တခုက ကျမရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခံစားချက်တွေဟာ ခေတ်ပြိုင် ခံစားချက်ဖြစ်သလို ပြည်သူလူထုရဲ့ ခံစားချက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမရေးနေတာ.. ကျမတို့ မိသားစုအကြောင်းချည်းပဲ ရေးနေတာ မဟုတ်ဘူး ထင်တာပဲလေ..။ (ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ရေးတယ်ဆိုလို့ပါ)။ ပြီးတော့ Blog ဆိုတာကိုကလည်း ကိုယ် ရေးချင် တာလေး ရေးဖို့ လုပ်ထားတာပါပဲ..။ ထားပါတော့။ ကျမကလည်း အဲလို ရှင်းပြလေ့ မရှိပါဘူး။ တဘက်က ကျမ အထင်လွဲမှာ စိုးတယ်ဆိုလို့ ကျမကလည်း ပြန်ပြောပြတာပါ.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြသီလာကို စောင့်ဖတ်တယ် ဆိုလို့ လည်း ပါတာပေါ့။ တခု သေချာတာကတော့ ကျမ ခံစားချက် နဲ့ ကြုံရတာတွေက ဆိုးတယ်..ဆိုရင် .. ကျမတို့ ပြည်သူလူထုက ဒါ့ထက် ပိုဆိုးတယ် ဆိုတာပါပဲ။ တက္ကသိုလ်က ကထိက တယောက် တောင် ဒီလောက် ဒုက္ခရောက်ရင်.. စဉ်းစားသာ ကြည့်ပါ တော့။ အဲဒါပါပဲ..။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သွားပေမယ့် စောင့်ဖတ် နေဆဲပါ ..
အန်တီတို့ မြန်မာစာငှာနမှာ မလေးမေ ဘကြီးနဲ့ မြန်မာစာ ရှိပါတယ်.. နောက်ပြီးတော့ အန်တီမေငြိမ်းမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့
ကိုဘုန်းမော်အကြောင်းနောက်မှ မေးချင်ပါသေးတယ်.. ဟီး .. မြန်မြန်လဲရေး.. များများလဲရေးနော့
ကိုဖီးနစ်ရေ .. ဒါကတော့ .. ဘယ်သူမဆို ကိုယ်စီကိုယ်ငှဝေဒနာကိုယ်စီပါပဲ .. အထက်လူကြီးတွေကို မစာနာရကောင်းလား လို့ လည်းမပြောပါနဲ့ ..
သူတို့ လည်းခံစားချက်ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ် .. ဒါပေမယ့်လည်း
နှလုံးသားနဲ့ ပါ ..
မယုံမရှိပါနဲ့ ..အန်တီမေငြိမ်းရေးတဲ့ စွယ်တော်ရိပ်
အကြောင်း ပိုစ့်တခုမှာ ဖတ်ရင်း ၀မ်းနည်းပမ်းနည်း မျက်ရည်ဝဲခဲ့ရပါတယ်.. သြော်..ငါတို့ ဘ၀ကျ အန်တီမသိရှာဘူး၇ယ်လို့.. :(
ပေဖြစ်ရတဲ့ဘ၀မှာ နဲနဲအထုခံရတာနဲ့ များများအထုခံ
ရတာပဲကွာတာ ..ကြားက နှစ်ပြန် အထုခံလိုက်ရတာ
ပြောပြချင်တယ်တကယ် :( ..
နောက်မှ အခွင့်ရရင် န်တီမေငြိမ်းကို
ပြောပြချင်တာတွေ အများကြီးပါပဲ ..
ဆက်ရေးပါ ဆရာမ မေငြိမ်း ခင်ဗျာ။ တကယ်လို့ခေါင်းစဉ် ပြောင်းရေးမယ်ဆိုလည်း ကောင်းပါတယ်ဗျာ။ မြသီလာ ဆိုလို့ဒီနှစ် ရန်ကုန်ပြန်တော့ ကျောင်းထဲကို ခဏခဏ ရောက်တယ်။ အဓိပတိ လမ်းက ၀င်ရင် ညာဘက် ဒုတိယဆောင်ကြီး နာဂစ်တုန်းက ပျက်သွားတာ ခုထိ မပြင်ရသေးဘူး အမိုးတွေ တော်တော်များများ ဟောင်းဟောင်းနဲ့ပေါ့ဗျာ။
ဆရာမရေ လိပ်စာပျောက်သွားတာရော မအားလပ်တာပါ ပေါင်းပြီး ဆရာမဘလော့ဂ်ကို မရောက်တာ အတော်ကြာသွားတယ်။ ရောက်တော့လည်း တော်တော်နဲ့ ပြန်ထွက်လို့မရပဲ စာတွေဆုံးအောင် ဖတ်ပြီးတဲ့အထိ ဆွဲခေါ်သွားခြင်း ခံရတဲ့အပြင် နောက်ထပ်အဆက်တွေကိုလည်း မျှော်နေပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းက ဆရာဆရာမတွေရဲ့ အခြေအနေကို သိခွင့်ရတာလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ထိုင်းမှာ အထူးသဖြင့် ဇင်းမယ်မှာ ပညာရေး အဆောက်အဦ၊ ပညာရေးအဆင့်အတန်းကို မြန်မာပြည်နဲ့ ယှဉ်ပြပေးပါလား။
ဆရာမတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျောင်း၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုတာတွေကို ဘယ်လို မြင်လဲလို့။
မ ရေ… လာဖတ်ပြီးတာကြာပြီ… ကော်မန့် တင်မရဖြစ်နေလို့ …
မရဲ့မေမေ စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့အသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေလို့ ။ (တိုက်ဆိုင်မှုတွေအတွက် ကြည်နူးရပါတယ် မ ရေ)
မြသီလာထဲက ချစ်စရာမိသားစုလေးရဲ့ ဘ၀အမောတွေတခန်းရပ်တဲ့အခါ ကြည်နူးစရာ စာမျက်နှာတွေကိုလဲ ဖတ်ရင်းကြည်နူးချင်ပါသေးတယ်။ ဒါမှပဲ မြသီလာက ပိုတက်ကြွစရာကောင်းမှာပါ မ ရယ်။ အဆိုးတွေလဲ အမြဲမရှိပဲ အကောင်းတွေတလှည့် လာတတ်တာကို မြသီလာက တဆင့် အင်အားဖြည့်ပါရစေ။ ဝေးလေလွမ်းလေမို့မြသီလာအလွမ်းက ခုမှ အရှိန်တက်လာတာပါ မ ရေ။ အလွမ်းတွေ မျှော်နေဦးမယ်နော်။
တခုတောင်းဆိုချင်တာက မြသီလာနဲ့ ဝေးမနေချင်ဘူး မရေ… ဒီတော့ မြသီလာဇာတ်သိမ်းရင် မျှော်လင့်ချက်လေးတွေနဲ့ဇာတ်သိမ်းပေးပါ မ ရယ်။ တချိန်ကျရင် မြသီလာကို ချစ်တဲ့ ဆရာမငြိမ်းခက်ခက်ကို မြသီလာက စာသင်ခန်းတွေထဲမှာ ပြန်မတွေ့ ရဘူးလို့ဘယ်ပြောနိုင်မလဲနော်။ အခွင့်ရရင် မြသီလာအရိပ်မှာ ပြန်ခိုဝင်ချင်ပါသေးတယ် မ ရယ်။
တူတူပဲ ခင်ဗျ။ အထက်တန်းကျောင်းနဲ့ မိသားစုကလွဲလို့ ဘာကိုမှ မလွမ်းဘူး။
စာဖတ်ရတိုင်း ခံစားမှု တခုခုအစဉ်ရပါတယ်။